ခုန်ပျံ ကျော်လွှား သွားကြမလား..? | ရွှေမင်းသား
Home » နည်းပညာ » ခုန်ပျံ ကျော်လွှား သွားကြမလား..?
ခုန်ပျံ ကျော်လွှား သွားကြမလား..?
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Thursday, September 13, 2007
ByPass နဲ့ ခုန်ပျံ ကျော်လွှား သွားကြမလား..?
ကျနော်တို့ Internet သုံးကြတဲ့နေရာမှာ တစ်ခါတစ်ရံ ဖွင့်လို့မရတဲ့ Site တွေရှိပါတယ်...အဲဒါကို ဘယ်လို ကျော်လွှားသွားကြမလဲ...Proxy ကိုသုံးကြမှာပေါ့....Proxy တွေကဘာလဲ....ဘယ်လိုမျိုးလဲ.....proxy တွေက ByPass လို့ခေါ်တဲ့ ခုန်ပျံကျော်လွှား သွားနိုင်မယ့် Site တွေပါ...အဲဒါတွေက..........
စသဖြင့် အများကြီးပါပဲ.....သိသလောက်ပဲ ရေးထားတာပါ....ကြိုးစားကြည့်ပါဦး.....Proxy ဖွင့်ပြီး Url ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဖွင့်ချင်တဲ့ Link ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Browse ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ခုန်ပျံကျော်လွှားစွမ်းပကားပေါ့။ ကောင်းတယ် အခုလိုလေးတွေ တင်ပေးတာ။
ကိုရွှေမင်းသားရေ ကောင်းတော့ ကောင်းတယ် မျက်စိ စပ်တယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ဗျာ။ အခုလို ခုန်ပျံ ကျော်လွှား ဖို့ တင်ပေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် စေတနာကို အသိအမှတ် ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို တင်ပေးထားတော့ မြန်မာပြည်က ဘန်းဖို့ စာရင်း ပြုစု ပေးသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုဒ်တွေပါ ထပ်ပြီး ဘန်းပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီလိုမျိုးတွေ မတင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ အကျိုးထက် စာရင် အပြစ်က ပိုများနေပါတယ်။ လုပ်ပေး လိုက်တာပဲ ရှိတယ် အကျိုးမရှိဘူး ဖြစ်သွားတတ်လို့ပါ ခင်ဗျာ။